“Dowlad aan Bakaaro xataa tagi karin | allsanaag
“Dowlad aan Bakaaro xataa tagi karin
Xildhibaan Sacdiyo Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegtay in Madaxweyne Farmaajo aanu la socon xaalada dalka uu ku sugan yahay, iyadoo caddeysay in go’aanka Madaxweynaha uu ku doonayo doorasho qof iyo cod aanu socon karin.
Xildhibaannada oo ka mid ah Xisbiyada Mucaaradka ayaa sheegtay in in amni darada dalka ka jirta ay korortay, iyadoo xustay in Mas’uuliyiinta dowladda aanay tagi karin Suuqa Bakaaraha.
“Shaqaalihii dowladda iyo mas’uuliyiinta ma tagi karaan qeybo ka mid ah Muqdisho, cabsi ay ka qabaan amniga awgeed, aniga waxaa maalin hore tagay Suuqa Bakaaraha anagoo wejiga i xirnaa, ehelkeygii waa argagaxeen waxay u dhaheen maxaa halkaan ku keenay, dowlad sidaa aan Bakaaro u tagi karin sidee doorasho qof iyo cod ku qabanee”ayay tiri.
Xildhibaannada ayaa tilmaamtay in loo baahan yahay go’aan mideysan oo ku aadan nooca doorashada oo heshiis lagu yahay, laguna gaaro shirka Dhuusamareeb 3 oo maalmaha soo socda furmi doona.
← Deni oo lagu soo dhoweeyay magaaladda Jabuuti DALKII WAA LA BOOBAYAA →